Nolosha Finland > Caafimaadka > Ka hortaga uurka
Uurka waxaa looga hortagi karaa cinjirka galmada (kondomi), kaniiniyada ka hortagga uurka (e-pilleri), kaniiniyada yar yar (minipilleri), sharootada la isku dhejiyo (ehkäisylaastari), faraantiga ka hortaga uurka (ehkäisyrengas), kabsolka ka hortaga uurka (ehkäisykapseli), faraantiga kupariga ah oo ilmogaleenka lagu xiro (kuparikierukka) faraantiga hormoonka (hormonikierukka). Uurka waxaa kaloo looga hortagi karaa dareeraha shahwada waxtarka ka qaada, tusaale ahaan xoorta la mariyo xubnaha tartanka ee dukarka (emätinvaahto) ama sunboosada la galiyo xubnaha taranka ee dumarka (emätinpuikko), laakiin kuwaan oo dhan waxtar xooleh ma lahan.
Isticmaalka kondomka ama cinjirku wuxuu kaa badbaadiyaa cuduro badan oo ku dhaca habdhiska galmada.
Cinjirka galmada waxaad ka iibsan kartaa tukaamada, shidaalada baansiinka, dabakaayooyinka iyo farmashiyeyaasha. Soo iibsigooda loogama baahna warqad dhakhtar. Qaar ka mid ah dareereyaasha shahwada raga waxtarka ka qaada waxaad ka iibsan kartaa farmashiyaha warqad dhakhtar la'aanteed.
Isticmaalka dawooyinka ka hortaga uurka ee hormonka ah waxaad u baahan tahay warqad dhakhtar, tusaale ahaan xarunta caaafimaadka (terveysasema) ee xaafadaada ama dhakhtarka gynekologiga ee khaaska ah. Waxaad waqti ka qabsan kartaa la talinta ka hortaga uurka (ehkäisyneuvonta) kaligaa ama adiga iyo lammaanahaaga oo wada socda. Inta badan wax waraaq dhakhtar ah ugama baahnid dib uga hortagida.
Kaniiniyada ka hortagga uurka, kaniiniga yar yar iyo sharootooyinka ka hortagida uurka iyo faraantiyada ka hortagida uurka waxaad farmashiyeyaasha uga iibsan kartaa adigoo isticmaalaya waraaq dhakhtarku kuu qoray.
Faraantiga kupariga ah iyo faraantiga hormoniga ah waxaa imlo galeenka galiya dhakhtar. Faaraantigu wuxuu ku haboon yahay dumarka horay u soo dhalay.
Sidoo kale dhalinyaraduna dhakhtarka waqti way ka qabsan karaan si dhakhtarku ugu qoro qalabka ka hortaga dhalmada. Ruqsada walidiinta looma baahna. Kalkaalida caafimaadka ee iskuulka ayaad kala sheekaysan kartaa ka hortaga, magaalooyinka qaarkoodna kaalkaalida caafimaadka ee iskuulka ayaa bixin karta baakadka bilaabida ka hortaga uurka.
Haddii dhibaato ka timaado ka hortaga ama aad hilmaantid inaad isticmaasho ka hortaga, waxaad farmashiga ka iibsan kartaa kaniiniga dib uga hortagida uurka (jälkiehkäisypilleri). Waa in la isticmaalo sida ugu dhaqsaha badan galmada kadib, ugu dambayn 72 saacadood kadib.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qalabka ka hortaga uurka waxaad ka heleysaa bogga internetka ee uururka diiwaanka dadka (Väestöliitto).
Ka hortaga uurkaFinnish
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 19.03.2019 Boggan war-celin ka soo dir